Nlele Palm Island nwere ngwugwu njem nlegharị anya nke Dubai
Chọpụta Dubaieze 212022-05-23T17:14:42+05:30
Echiche dị na Nkwụ
Abalị 05 / 06 ụbọchị na-anọ na Four Star Dubai Hotel gụnyere nri nri nri nri nri.
Gaa na Dubai Frame na mbufe mbufe na oche na ndabere onye nchịkwa.
Gaa na View na Nkwụ yana mbufe nloghachi na ndabere nkeonwe.
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. Mgbe nri ụtụtụ gachara na-aga n'otu n'ime ihe owuwu Dubai Frame. The Dubai Frame bụ otu n'ime obodo ama ama maka ndị ọbịa na ndị bi na ya. Dị ka ihe owuwu Burj Khalifa na Burj Al Arab nwere akara ngosi, ebe ọmarịcha ụlọ ahụ dị na Zabeel Park na-enye echiche panoramic mara mma nke obodo ahụ. Na 150m ogologo na 93m n'obosara na akwa mmiri jikọtara ụlọ elu abụọ ahụ, Dubai Frame nwere echiche pụrụ iche na nhazi ya. N'ihe dị ka etiti eserese, enwere ike ịhụ mpaghara akụkọ ihe mere eme nke Dubai n'ebe ugwu ebe ndịda na-enye ọmarịcha ọhụụ nke mbara igwe ọgbara ọhụrụ nke obodo. A ga-ebuli na mbupụ na ụgbọ ala ekekọrịta.
E mesịa, a ga-akpọga gị na View na The Palm See Dubai site n'akụkụ ọhụrụ!
Nlele ogo 360 dị egwu 240 mita n'elu ụwa ama ama Jumeirah Na 240 mita elu, The View on level 52 of the iconic Palm Tower na-enye panoramic, 360-degree echiche nke Palm Jumeirah, Arabian Gulf na gafere site na mbara èzí na a premium. ụlọ ezumike. Chọta akara ngosi akara ngosi na akụ zoro ezo nke obodo a mara mma. A ga-ebutu na mbupụ ga-abụ n'ụgbọ nkeonwe.
Ịkekọrịta Otu $ 631
Ịkekọrịta ugboro abụọ (ọnụego otu onye) $ 430
Agba okenye ọzọ $ 415
Ịkekọrịta ụmụaka na -enweghị akwa ọzọ $ 294
Nkata ụmụaka na akwa ọzọ $ 388
Aha ụlọ nkwari akụ: Hyatt Place Dubai ma ọ bụ ihe yiri ya